ဧရာညီနောင်: ABBYY PDFTransformerv3.0.100.399
ABBYY PDFTransformerv3.0.100.399 လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပါရစေ”
(၁)ဒီPDFTransformerလေးကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်ကီးဘုတ်ကနေPrintScreenရိုက်ရတဲ့ဒုက္ခကနေဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ScreenShotReaderပါလာခြင်းကြောင့်Captureအနေနဲ့area,window,screen,timedsreenလေးတွေထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို capture လုပ်နိုင်ပြီးကိုယ့်သိမ်းချင်မယ့် text,table,Imageတို့ကို
Microsoftword, Exel, File, Clipboard, E mail တို့အားရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
(၂)နောက်တခုက Combine Multiple File ပါလာပြန်တော့ ကိုယ်ပေါင်းချင်မယ့် ဖိုင်တွေအားလုံးကို selectမှတ်ပြီး add Files မှာထည့်ပြီးတော့ PDF Flie တခုတည်း ဖန်တီးယူလိုက်ရုံပဲ။
(၃) PDF ကနေMicrosoftword, Exel, PDF, RTF, TXT, HTML Document တွေကိုလည်းပြောင်းယူလို့ရပါတယ်။
(၄)နောက်ဆုံးတခုကတော့ Document ကနေ PDF ဖန်တီးတဲ့နေရမှာ Compressed, Non-compressed တို့ ပါဝင်လာခြင်းကြောင့် လိုအပ်လျှင် Security အရ Passwordထည့်သွင်းယူလို့ရသလို Bates Stampingကနေမိမိစိတ်ကြိုက် Date, Time, Page Number, Border တွေကိုထည့်သွင်းယူနိုင်တဲ့ အရမ်းလွယ်ကူတဲ့ PDFTransformerအတွက် Crack, Patch တို့ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
System requirements: A computer with an Intel ® Core ™ 2/Pentium ® / Celeron ® / Xeon ™, AMD K6/Turion ™ / Athlon ™ / Duron ™ / Sempron ™ or compatible processor, clocked 1 GHz or higher. Windows7operating system, Windows Vista ®, Microsoft ® Windows Server ® 2003, Windows XP. Windows 7
အောက်မှာဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ KOSOE (KyaukPhyu)
Posted by ဧရာညီနောင် at 6:53 AM